Xog dheeraad ah oo laga helay kulankii seddex-geesoodka ahaa ee Rooble, Kheyre iyo Shariif. | Warbaahinta Ayaamaha
Xog dheeraad ah oo laga helay kulankii seddex-geesoodka ahaa ee Rooble, Kheyre iyo Shariif.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Guddoomiyaha Midowga Musharrixiinta ahna Madaxweynihi hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan gaar ah uu la yeeshay Safiirka dowladda Norway u jooga Somalia Elin Bergithe Rognlie.
Kulanka dhexmaray Shariif Sheikh Axmed iyo Safiirka dowladda Norway u jooga Somalia Elin Bergithe Rognlie ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka, iyo xaaladaha kasoo cusboonaaday arruimaha siyaasadda dalka.
Waxaaan inta kulanku socday si gaar ah diiradda loo saaray dar dar gelinta doorashada dalka, dhaqan gelinta heshiiska Golaha wada-tashiga Qaran, isagoo ka mahad celiyey taageerada beesha caalamka gaar ahaan Norway ee ku aaddan Nabadda iyo Dimuqraadiyadda Soomaaliya.